Iwumqansa impilo kudokotela onengane edinga umnkantsha - Ilanga News
Home Izindaba Iwumqansa impilo kudokotela onengane edinga umnkantsha
Ucela noma ngubani onganikela, asize indodakazi yakhe nokuthi abantu bafundiseke ngalesi sifo
UFANELE odinga ukunikelelwa ngomnkantsha ukuze aphile.
UMNDENI waKwaMkhulisi eGlenmore, eThekwini, uthi ufisa indodakazi yawo ithole ithuba lesibili empilweni, lokhu kulandela ukutholakala kokuthi inomdlavuza womnkantsha. UDkt Gugu Mkhulisi ongunina kaFanele (7), uthi kayikho into engamjabulisa njengokubona indodakazi yakhe idlala njengezinye izingane, ithola nethuba elifanayo lokuya esikoleni.
Elandisa ILANGA ngokugula kwendodakazi yakhe esize yayeka isikole uthi, itholakale ukuthi inomdlavuza womnkantsha obizwa nge-Acute Myeloid Leukemia, ngoMarch (Ndasa) nonyaka. “Ngesikhathi eneminyaka emithathu, kwatholakala ukuthi unomdlavuza wezinso. Kuthe uma kuqhubeka iminyaka kwatholakala ukuthi usenomdlavuza womnkantsha,” kuchaza unina. Uthi ngemuva kokutholakala kwalo mdlavuza, kugcine sekudingeka ukuba babhekwe ukuthi bangakwazi ukumesha njengabazali ukuze bayinikelele indodakazi yabo ngomnkantsha, kepha kwangamesha muntu emndenini wabo.
“Sisaqhubeka nokubheka umuntu ongakwazi ukusinikelela, uyaqhubeka nokwelashwa ngechemotherapy kuze kube kutholakala ozokwazi ukumeshelana negazi lakhe,” kuchaza unina. Uthi kulolu hlobo lomdlavuza igazi lisuke lingajwayelekile, okuwukuthi likhiqiza ama-cells angakavuthwa ngokwanele, asuke enomdlavuza. Yingakho kudingeka umnkantsha okuyiwo okhiqiza igazi. Uthi konke lokhu kufake ingcindezi emndenini ngenxa yokuthi indodakazi yakhe bekumele iyeke isikole ngoba kakumele ihlangane nabantu abaningi, ngoba lokhu kwandisa amathuba okuthi igule kalula.
“Esemncane kwakungenankinga etheni ngesikhathi enomdlavuza wezinso. Kodwa manje kumele simchazele ngesimo sakhe, kunzima nokumgwema ukuthi angadlali nezinye izingane uma ezizwa zimemeza ngaphandle. Kodwake useqonda kangcono manje ukuthi sigwema ukuthi angaguli,” kuchaza uDkt Mkhulisi. Uthi kubethusile futhi kwabadida ukuthi bangaphinde futhi babhekane nolunye uhlobo lomdlavuza.
“Yinto ebesingayilindele, kunalokho besilindele ukuthi mhlawumbe kungabuya umdlavuza wasekuqaleni,” esho.
Enye inselelo kube ngeyokuchazela umndeni kungabi sengathi baziqhelelanisile nawo futhi nakhona kumele bachaze ngalolu hlobo lomdlavuza wakamuva. “Yisimo esinzima okumele sibhekane naso nsukuzonke ngisho nakubantu bangaphandle,” kuchaza uDkt Mkhulisi.
Yize unina kaFanele (odinga ukunikelelwa) engudokotela uthi ukuba semkhakheni wezempilo kufane nento eyisibusiso kodwa futhi eyisiqalekiso. “Kuneziguli ezelashwayo othola ukuthi ukwelashwa kwazo kuyaphumelela kwabanye kungabi njalo. Impi yomdlavuza yinto engiyibona nsuku zonke njengoba ngisebenzela eChief Albert Luthuli. Yize kunjalo, bekumele nami ngifunde ngomdlavuza ngoba angigxilile kuwona ngokomsebenzi. Kunzima ukuthi ngihlenga izimpilo zabantu kepha uma sekumele ngihlenge owami umntwana kangikwazi,” kuqhuba yena.
Uthi ukuhamba le ndlela kumvule amehlo, ngoba bekumele ahlome ngolwazi. UDkt Mkhulisi uthi umnikelo odingeka kuFanele ngotholakala egazini kuma-cells, onikelayo akudingi nokuthi ahlinzwe. “Izinto sizibukela kude thina bebala elinsundu, sizitshele ukuthi kunezigulo zabebala elithile. Kubalulekile ukuthi nathi sinikele, uma siba baningi namathuba okuthola ozokunikelela ayanda,” esho. Uthi akutholile wukuthi abantu baswele ulwazi, hhayi ngoba bengafisi ukunikela. “Kubalulekile ukuthi bande abanikelayo futhi izinto sichazelwe ngolimi lwethu,” esho.
UDkt Mkhulisi uthi kuphoqeleke ukuthi umyeni wakhe ayeke emsebenzini ngenxa yokuthi ingane idinga ukuya esibhedlela esikhathini esiningi, ngenxa yezingqinamba eziwumphumela wokwelashwa (side effects) nama-infections. Uthi lokhu kube nomthelela nakwezemali emzini wabo. “Esikufisayo wukuthi indodakazi yethu ithole ithuba lesibili lokuthi iphile impilo eyejwayelekile bese ifeza amaphupho ayo nayo,” ephetha. Uma ufisa ukunikela ungabhalisa kwi-website yakwa South African Bone Marrow Registry ethi-www.sabmr.co.za kuthatha imizuzu emithathu. Bazobe sebexhumana nawe ngqo. UFANELE odinga ukunikelelwa ngomnkantsha ukuze aphile. wumqansa impilo kudokotela onengane edinga umnkantsha Ucela noma ngubani onganikela, asize indodakazi yakhe nokuthi abantu bafundiseke ngalesi sifo.
Previous articleICosatu ihlongoza “ukuvala izwe”
Next article23 JUNE 2022